သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> ကော်ဇောအပ် -> ကော်ဇောအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan ကော်ဇောအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
Equivalent Systems: 485N
ဒါဟာ, စောင်ဂုန်သို့မဟုတ် Poly အိတ်, အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကော်ဇောသို့မဟုတ် rugs အတွက် edging ကျော်အောင်များအတွက်ဆိုးပိုက်များနှင့်သင့်လျော်သော edging ကျော်ဘက်စုံသုံးကော်ဇောအဘို့ဖြစ်၏စားပွဲပေါ်မှာဖျာ, အိပ်ရာဖုံးလွှမ်း, scarves, sunblind, နှင့်အခြားအပိုလေးလံသည့်ပစ္စည်းများ။ စုစုပေါင်းအရှည် R ကိုပွိုင့်နှင့်အတူ 83,1 မီလီမီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှင့်ညီမျှရေးစနစ်မထားဘူး။
Carpet Sewing Needles | Teppich Nähnadeln | Ковровые Швейные иглы | Tapete Costura Agulhas | Carpet cucito Aghi | कालीन सिलाई सुई | Alfombra Las agujas de coser | السجاد إبر خياطة | Thảm May kim | พรมเข็มเย็บผ้า | Karpet jahit Jarum | গালিচা সেলাই সূঁচ | Halı Dikiş İğneleri | កំ​រាល​ព្រំ​ម្ជុល​ដេរ | ကော်ဇောအပ်ချုပ်အပ်နဖားကို	|job search